किन दह्यो हुन्छ नोकिया फोन ? यसकोबारेमा रोचक जानकारी « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
किन दह्यो हुन्छ नोकिया फोन ? यसकोबारेमा रोचक जानकारी
२० पुष २०७५, शुक्रबार १४:२८ मा प्रकाशित
सायद हामीहरु मध्य नोकिया फोन प्रयोग नगरेका थोरै छै होला । कतिले त अझै पनि नोकिया फोन नै प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ होला । नोकियाले आफ्नो उत्पादन पुनस् सुरु गरेपछी किनेर चलाउनेहरु पनि हुनुहुन्छ होला ।
यती सम्म कि बिभिन्न सामजिक सन्जाल हरुमा नोकिया को मज्बुती लाई लिएर बनेका धेरै थरिका ब्यङ्यात्मक पोस्ट हरु निकै नै देख्न पाहिन्छ। जस्तै किस् सामसुङ खसे स्क्रीन फुट्छ , नोकिया खसे जमिन नै फुट्छ र आईफोन खसे फोनको साहुको मुटु फुट्छ । रमाइलो को लागी मात्र यो प्रसँग उठायौ ।
नोकियाको बारेमा १० रोचक जानकारीहरु :
फिनल्यान्ड मा नोकिया लाई “क्ष्लमभकतचगअतष्दभि” ९ अबिनासकारी ० को उपनाम दिइएको छ । यतिसम्म कि नोकिया ३३१० लाई फिनल्यान्डले राष्ट्रिय चिन्ह तोकेको छ ।
आन्तरिक एन्टिना को प्रयोगको सुरुवात नोकिया बाट नै भएको थियो । टाइपिङमा को अप्सन भित्राउने पनि नोकिया नै थियो। आईफोन पहिलो पटक लन्च हुँदा २ करोड ५० लाख थान बिक्री भएको थियो,जबकी नोकिया पहिलो पटक लन्च हुँदा १ अर्ब २६ लाख थान बिक्री भएको थियो ।
केहि समयअघी मात्र बेलायत को पत्रीकाले एउटा लेख प्रकासन गरेको थियो । एक ब्यक्ती जसले सन् २००० मा नोकिया ३३१० किनेर आहिले २०१७ सम्म पनि उहि फोन बिना कुनै समस्या चलाईरहेको बिषय मा एउटा रोचक जानकारी उक्त लेखमा उल्लेख गरिएको थियो ।
मोबाईलमा पहिलो पटक ईन्टरनेट च्याट को सुबिधा दिने मोबाईल नोकिया ३३१० नै थियो । एजेन्सी